15 Elula Futhi Ejabulisayo Yezandla Yephasika Yezingane | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Elizabeth Catalan | 27/10/2021 18:00 | Imisebenzi yezandla yezingane, Semana Santa
Amaholide ePhasika yisikhathi esihle sokuba izingane zithuthukise ubuciko bazo ngokwenza imisebenzi yezandla ye-Easter yezingane. Ngaphezu kokuzijabulisa ngokwenza imisebenzi yezandla, bangaphinda bahlobise amagumbi abo futhi badlale ngawo.
Kulokhu okuthunyelwe uzothola ukuhlanganiswa kwe 15 I-Easter Yezandla Yezingane kulula kakhulu futhi kumnandi lapho uzoba nesikhathi esihle. Ungaphuthelwa!
1 Unogwaja we-Easter ukugcina ukuphatha
2 Indlela yokwenza iqanda le-Easter nge-rubber eva chick
3 I-DIY: I-Easter bunny ene-roll roll
4 Isibopho sikanogwaja we-Easter ISINYATHELO NGESINYATHELO
5 Iqanda elinomlayezo omangazayo
6 I-DIY: Ungawakhipha kanjani amaqanda e-Easter?
7 Indlela yokwenza ibhasikidi lePhasika
8 Iviki Elingcwele ihood yamaNazaretha
9 Isinyathelo ngesinyathelo sebhokisi likaswidi le-Easter elimise okwenogwaja
10 Ungenza kanjani i-Easter bunny
11 Umhlobiso weqanda le-Easter
12 Upopayi womunwe wePhasika
13 Siguqula inkomishi yeqanda ibe yimininingwane yesipho ngePhasika
14 I-DIY sihlobisa incwadi yokubhalela yama-Easter
15 Ungasihlobisa kanjani isikhwama se-Easter igxathu negxathu
Unogwaja we-Easter ukugcina ukuphatha
Bonke abancane bathanda amaswidi futhi lokhu I-Easter Bunny kuzoba yindlela ejabulisayo yokubasindisa. Ingenye yemisebenzi yezandla ye-Easter elula kakhulu yezingane ongayenza ngokugaya kabusha amapuleti epulasitiki namakhadibhodi. Kungumsebenzi osheshayo futhi olula lapho izingane zingasebenzisana nakuba kufanele uqaphele lapho uphatha i-silicone eshisayo.
Izinto ozozidinga ipulasitiki emhlophe eyisicaba noma ipuleti lekhadibhodi, amakhadibhodi anombala futhi anephethini, amehlo epulasitiki, ipompom eluhlaza okwesibhakabhaka ... Uma ufuna ukwazi okusele futhi ubone ividiyo yokuthi kwenziwa kanjani. ungaphuthelwa okuthunyelwe Unogwaja we-Easter ukugcina ukuphatha.
Indlela yokwenza iqanda le-Easter nge-rubber eva chick
Uma kukhona uphawu olwaziwayo lwala maholidi, iqanda lePhasika, yingakho kungenye yemisebenzi yezandla yePhasika yezingane ezincanyelwa yiyo yonke imindeni ukuthi zizijabulise ngokuzihlobisa.
Lo msebenzi wezandla uhluke kancane. Ukuze ukwenze uzodinga irabha yegwebu, izimpawu ezihlala njalo, isikelo, iglu nezinye izinto. Ungathanda ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani lokhu iqanda lephasika elimibalabala? Eposini Indlela yokwenza iqanda le-Easter nge-rubber eva chick uzoba nayo yonke imininingwane.
I-DIY: I-Easter bunny ene-roll roll
Omunye wabalingisi abadume kakhulu kule mikhosi yi- I-Easter Bunny. Kulesi senzakalo, ubuciko obulandelayo bungenye yezandla ze-Easter ezilula kakhulu zezingane lapho izingane ezincane zingabamba iqhaza, ngoba azidingi izinto eziningi kanye namathuluzi.
Into eyinhloko yikhadibhodi lephepha langasese. Ungabona ezinye izinto zokusebenza ozozidinga kokuthunyelwe I-DIY: I-Easter bunny ene-roll roll kanye nenqubo yokuyidala.
Isibopho sikanogwaja we-Easter ISINYATHELO NGESINYATHELO
Kulokhu kuhlanganiswa kobuciko be-Easter bezingane awukwazi ukuphuthelwa le nguqulo yodumo I-Easter Bunny, okungokoqobo kancane. Yenziwe nge-Fimo noma ubumba lwe-polymer futhi izosebenza ukuhlobisa izipho ze-Easter, njengesithombe sokuhlobisa noma njengokumangala emaqandeni kashokoledi.
Izinto ozozidinga yi-Fimo noma ubumba lwe-polymer namathuluzi afana nommese wobumba nesipikili samazinyo. Ukuze ubone inqubo yokudala isinyathelo ngesinyathelo, ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe Isithombe sika-Easter bunny.
Iqanda elinomlayezo omangazayo
Phakathi kwemisebenzi yezandla ye-Easter yezingane, okulandelayo kuzokusiza ukuthi uhalalisele amaholide kubangani nezihlobo uma ubamema ngenye intambama ukuzoba nepikiniki.
Abancane bazoba nesikhathi esihle sokudweba amaqanda anemibala! Awudingi izinto zokwakha eziningi kodwa udinga ikhono elincane kwezinye izingxenye zenqubo, ngakho-ke uma izingane zisencane cishe zizodinga usizo lwakho. Ungenza kube ngokwakho ngemibala nemiyalezo oyifunayo.
Thola amaqanda, inaliti, isikelo, amapende namabhulashi bese ubheka imiyalo ozoyithola kokuthunyelwe Iqanda elinomlayezo omangazayo. Impumelelo eqinisekisiwe!
I-DIY: Ungawakhipha kanjani amaqanda e-Easter?
Ukwenza imanuwali engenhla, iqhinga eliboniswe kokulandelayo lizokusiza: Indlela yokukhipha amaqanda e-Easter? Uzodinga inaliti, amanzi, insipho namaqanda.
Lapho iPhasika lifika, amaqanda athatha indima ekhethekile. Izindlela zokupheka eziningi ezifana ne-torrijas noma ama-fritters zilungiswa ngokusebenzisa lesi sithako, ngakho-ke ungasebenzisa amaqanda ukuze ulungiselele lawa maswidi amnandi namagobolondo awo ukuze izingane zizijabulise isikhashana zenza enye yamaswidi. iphasika yezandla izingane ebanda kunazo zonke.
Indlela yokwenza ibhasikidi lePhasika
Labo abanezinyo elimnandi bazothanda ukulungiselela ubuciko obulandelayo. Ingenye yalezo zandla ze-Easter zezingane eziphelele ukwethula amaswidi ephathini futhi akunzima kakhulu ukuthi zenze uma zinosizo oluncane.
Ukulungiselela lokhu Ubhasikidi wePhasika Uzodinga kuphela amakhadibhodi anombala (okungcono ukubuyisela emuva), i-blush, isikhunta sembali kanye neglue. Ungahlola ukuthi kwenziwa kanjani kokuthunyelwe Indlela yokwenza ubhasikidi we-Easter.
Iviki Elingcwele ihood yamaNazaretha
NgeSonto Elingcwele leSpanishi, i amanazaretha banendima ebalulekile odwendweni lwenkolo. Ungakwazi ukufundisa izingane incazelo yalo ngenkathi ulungisa lo msebenzi wezandla omele isigqoko sePhasika lamaNazaretha.
Kungase kube omunye wemisebenzi yezandla ye-Easter eyaziwa kancane uma kuqhathaniswa ne-Easter bunny noma iqanda, kodwa izingane zizoba mnandi kakhulu ukwenza. Njengezinto zokwakha, kuzodingeka ukuthi uthole kuphela amakhrayoni noma amapensela anemibala, isifanekiso kanye neglu. Ungathola yonke imininingwane kokuthunyelwe I-Hood Engcwele Yesonto.
Isinyathelo ngesinyathelo sebhokisi likaswidi le-Easter elimise okwenogwaja
Lona omunye waleyo misebenzi yezandla ye-Easter yezingane ezokwenza amaholide ajabule: ibhokisi likaswidi elimise okwe I-Easter Bunny. Ngaphezu kokwenza kabusha ezinye izinto onazo ekhaya, kuwumsebenzi wezandla olula kakhulu ukuwenza, futhi ngezinyathelo ezimbalwa nje zizobe sezilungile. Ngisho nezingane ezincane zizokwazi ukuzenzela.
Njengezinto zokwakha uzodinga ikhadibhodi lamaroli ephepha lasendlini yangasese, amapensela anemibala, amapeni, isikelo, iglue, amaswidi nezinye izinto. Ungathola yonke inqubo kokuthunyelwe Isinyathelo ngesinyathelo sebhokisi likaswidi le-Easter elimise okwenogwaja.
Ungenza kanjani i-Easter bunny
Enye yezindlela ongahlobisa ngayo indlu yakho ngePhasika ngokudala lokhu okunelukuluku umcamelo we-bunny. Izingane ezindala zizothanda ukwenza imisebenzi yezandla yezingane enzima kakhudlwana ukuze zihlole amakhono azo, nakuba cishe zizodinga usizo lwabantu abadala ezinyathelweni ezithile.
Ziningi ukusetshenziswa kwalo. Eyokuqala njengomhlobiso wamagumbi endlu: igumbi lokuphumula, amakamelo okulala, ikhishi ... lingasetshenziswa nokubamba umnyango futhi uhlale uvulekile. Uzodinga ukuthola izinto ezinjengama-padding, indwangu enemibala, inaliti kanye nentambo phakathi kwezinye izinto. Ukuze ukwazi okwengeziwe ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe Ungenza kanjani i-Easter bunny.
Umhlobiso weqanda le-Easter
A classic of Easter umhlobiso we Amaqanda ama-Ista ngoba kuwumsebenzi ojabulisa kakhulu futhi wokudala. Lesi sikhathi sizobona enye indlela yokuhlobisa amaqanda ngezinto ezifana nephepha, izinkinobho noma umbala wokudla.
Eposini Umhlobiso weqanda le-Easter uzothola lonke ulwazi oludingayo ukuze wenze lo msebenzi wezandla ojabulisayo.
Upopayi womunwe wePhasika
Okulandelayo ngomunye wemisebenzi yezandla yePhasika izingane ezincane ezizozijabulisa ngayo: a unogwaja unodoli.
Kulula kangangokuthi ukwenza akunaqhinga! Ngakho ngokuphazima kweso izingane zizobe zidlala naye futhi zizoba nesikhathi esijabulisa kakhulu. Ukwenza le puppet uzodinga: amakhadibhodi anemibala. amehlo obuciko, ipensela, isikele nezinye izinto ongazibona eposini Upopayi womunwe wePhasika. Kuvidiyo uzobona isinyathelo ngesinyathelo sokuthi kwenziwa kanjani ngakho kuzoba lula kakhulu ukukwenza.
Siguqula inkomishi yeqanda ibe yimininingwane yesipho ngePhasika
Uma ufuna ubuciko be-Easter bokuqala bezingane, kufanele ubheke lokhu indebe yeqanda lesipho njengoba kuyimininingwane emnandi kakhulu ukunikeza ngalawa maholide. Ngaphakathi ungagcina noma yini oyifunayo: amaswidi, amacici, ushokoledi, amaqanda kashokoledi, iziqeshana zokubhala ...
Njengezinto ozodinga: inkomishi yeqanda lekhadibhodi, opende be-acrylic, amabhulashi, amakhadibhodi anemibala ... Uyafuna ukwazi okunye? Eposini Siguqula inkomishi yeqanda ibe yimininingwane yesipho ngePhasika uzothola yonke imininingwane kanye nenqubo yokukhiqiza isinyathelo ngesinyathelo.
I-DIY sihlobisa incwadi yokubhalela yama-Easter
Izingane zingasebenzisa ithuba lamaholide ePhasika ukuhlobisa izimpahla zazo zesikole futhi zinikeze ukuthintwa komuntu siqu. Ngokwesibonelo, nalokhu nice I-Easter Bunny phezu kwekhava yencwajana onayo ekhaya.
Eposini I-DIY sihlobisa incwadi yokubhalela yama-Easter Uzothola isifanekiso sokudala kabusha unogwaja kodwa uma unekhono lokudweba, ungazenzela wena. Ezinye izinto ozozidinga kulo msebenzi yiphepha elihlotshisiwe, amakhadibhodi anemibala, incwadi yokubhalela, uyinki, njll. Ziyizinto ongazithola kalula endlini, okwenza kube omunye wemisebenzi yezandla ye-Easter elula kakhulu yezingane.
Ubuciko bokugcina balokhu kuhlanganiswa yilokhu isikhwama ehlotshiswe Easter motifs ukuthi ungapenda uma kwenzeka ngesikhathi samaholide kufanele wenze isipho ngoba uzochitha njengomndeni.
Ukuze wenze lo msebenzi wezandla uzodinga isikhwama, amakhadibhodi, iphepha elihlotshisiwe, ipensela, isikelo, izimbali ezomisiwe ... Kokuthunyelwe Ungasihlobisa kanjani isikhwama se-Easter igxathu negxathu Uzobona indlela yokuhlobisa isikhwama esihle nenhle oyothanda kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Izikhathi ezikhethekile » Semana Santa » 15 I-Easter Yezandla Yezingane
Imisebenzi yezandla yokugqoka i-Halloween